Warar adeegga ku saabsan - InfoFinland
Soo saarista waxyaabaha gudaha ku jira
Waxyaabaha la turjumay
Sida loola xiriiro
InfoFinland waa shabakad xagga internetka ah oo luuqado badan ku qoran, taas oo lagu soo aruuriyo maacluumaad badan oo muhiim u ah dadka qorshaynaya inay Finland u soo guuraan ama kuwa halkan horay u deganaa. Boggu wuxuu sidoo kale u adeegaa ka caawiyaa hawlwadeenada hay'adaha dawliga ah dhanka macluumaad siinta luuqadaha badan.
Isticmaalaha InfoFinlandi wuxuu helayaa macluumaad la aamini karo oo luuqadiisa ku qoran kuna saabsan u soo guuridda Finland, shaqada, waxbarashada, degaanka, tacliinta, caafimaadka, qoyska, xaaladaha dhibku jiro iyo waqtiyada firaaqada. Wararkan si joogto ah ayaa loo cusboonaysiinayaa.
Bogga InfoFinlandi waa jawaab celiye. Waa sahal inaad u isticmaasho aaladaha kala gedisan, sida telefoonada smartiga ah iyo kombuyuuterada yar yar ee tabletiyada ah.
Luuqadaha adeeggu waa, Iswidish, Ingiriis, Ruush, Viro, Faransiis, Soomaali, Ispanish, Turkki, Jayniis, Bershia iyo Carabi. Nuqulada luuqadu waa is shabahaan. Xafiiska turjumidda ayaa u xil saaran turjubaanidda.
Intaas waxaa dheer in InfoFinlandi uu leeyahay xiriir ama wadiiqo kugu ridaysa qoraalo ama walxo lagu daabacay luuqado kale.
Macluumaad la xiriira adeegyada degaankaaga
InfoFinlandi waxaa laga helayaa macluumaad la xiira adeegyada degmooyin dhawr ah. Xariirka (linkki) bogga degmada waxaad ka heleysaa qoraalka saxda ah adigoo isticmaalaya doorashada magaalooyinka. Markii isticmaaluhu uu galo bogga internetka ee degmada, waxaa la tusayaa xiriir ama wadiiqo ku xireysa macluumaadka aasaasiga ah ee mawduuca.
Bogga Magaalooyinka waxaad ka heleysaa kaartada degmooyinka ee InfoFinlandi.
Bogga InfoFinlandi waxaa maamula magaalada Helsinki. InfoFinlandi wuxuu u xilsaaran yahay soo saaridda iyo cusbooneysiinta macluumadka qaybaha kala ah U soo guuridda Finland, Nolosha Finland, Macluumaadka ku saabsan Finland iyo Helsinki, Espoo, Vantaa iyo Kauniainen. Magaalooyinka kale ee xubnaha ka ah InfoFinlandi iyagaa u xil saaran maamulidda iyo cusbooneysiinta bogga degmadooda.
Dalbashada koorsooyinka luuqadaha Finnishka iyo Iswidishka Finnishcourses.fi waa qayb ka mid ah adeegga InfoFinlandi.
Koorasyada luqada Finnishka iyo IswidishkaFinnish | Ingiriis | Ruush
InfoFinlandi waxaa maalgeliya dawladda dhexe iyo degmooyinka wadashaqayntu ay ka dhexayso.
Madaxa wararka iyo u xilsaaranaha waradka ee InfoFinlandi waa Eija Kyllönen-Saarnio.
Magaca adeegga shabakadda nfoFinland wuxuu horay u ahaan Infopankki. Magaca waxaa la beddelayaa Nofeembar 2018.
Bogga adeegga ee Infopankki.fi waxaa la soo saaray sannadkii 2003 ayadoo ay iska kaashadeen Xarunta dhaqamada caalamiga ah ee Caisa iyo Maktabadda magaalada Helsinki wuxuuna ka hawlgalayey Xarunta dhaqamada ee Helsinki dhexdeeda.
CaisaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Hadda InfoFinland wuxuu ku shaqeeyaa qeybta warfaafinta ee ee xafiiska magaalada Helsinki.
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 22.06.2021 Boggan war-celin ka soo dir